21 Iimbono zoMbutho wePatry namaqhinga -Ungayihlela njani i-Pantry yakho - Ukulungiselela
21 Iimbono zoMbutho wePatry namaqhinga -Ungayihlela njani i-Pantry yakho
Ikhitshi lekhitshi linamathela ekugcineni izinto zokubala zakho noko Ukungabinazinto ezicocekileyo , kwaye nokuba ingakanani eyakho, kukhuselekile ukuba ungasebenzisa indawo encinci. Ngaphandle kwento ukuba ibingeyiyo indawo oyifunayo kwi iperi , kodwa endaweni yoko, kukuhlengahlengisa okuthile umbutho kunye nezisombululo zokugcina? Silapha ukukuxelela ukuba mhlawumbi yeyokugqibela-ezona ziindaba zimnandi, kuba iyakugcina i-pantry yakho (kunye nobomi) isebenze ngakumbi kwaye ibe nocwangco. Ungayichazanga eyakho, amashwamshwam akho aya kujongeka nangakumbi kwaye ngekhe uphinde uthenge naziphi na iziqholo kwakhona. Phambili, fumana izimvo zombutho ezingama-21 eziza kuwusindisa ngokwenyani umhla.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Sebenzisa imigqomo yeendiza JOE SCHMELZER
THENGA NGOKU Ibhasikithi yengca yolwandle yeedola ezingama-40
Imigqomo yeendiza kunye neebhasikithi ziyintandokazi kumagumbi okudlala, iiofisi, nakwiikhabhathi kuyo yonke indawo, kodwa banendawo kwindawo yakho. Ukutya okunkonkxiweyo ngokwamacandelo (iisosi zetumato, imifuno, njl.njl.) Ngaphandle kokuphakamisa isiciko ukuze uzibuyise. Okanye, zisebenzise njengokubamba-zonke izinto ezinjenge-napkins kunye neendwangu zetafile. Ezi shelufu zityaliweyo kwi-pantry eyenzelwe iAlice Lane nayo yenza ukugcinwa okunzulu, ngendlela.
Mbini Guqula iishelufa zibe ziidrowa USara Tramp
THENGA NGOKU Ukukhupha ishelf, $ 86
Iidraw ezikhutshiweyo zikuvumela ukuba upakishe i-pantry yakho egcwele ukutya ngaphandle kokukhathazeka malunga nokulahleka kwesosi yakho ye-pasta kwikona ekude kakhulu ongenakufikelela kuyo. Hlela iidrowa zakho ngohlobo lwento ukuze ugcine ngakumbi ngokudibeneyo. UEmily Henderson zipeyinti iikhabhathi ziluhlaza okomnyama kwisitayile esithe kratya kule ndawo ye-closet ye-closet.
3 Izikhongozelo zePlastikhi UFrank omangalisayo
THENGA NGOKU Izikhongozeli zokutya zeplastikhi, $ 28
imifanekiso yezityalo zangaphakathi
Izikhongozeli eziflethi zibambe ngokulula ukuthatha ithuba lazo zonke iindawo kwisitayile. Zisebenzise ukugcina iinkozo, isonka, irayisi kunye namandongomane. Kule ndawo ilungeleleneyo, izikhongozeli zesiko ziyasilayida ngaphandle kwezishelufa ukuze zifikeleleke lula.
4 Hlanganisa i-Pegboard UMARIE PIERRE MOREL
THENGA NGOKU IBhodi yePeg, $ 190
Endaweni yokufumba iimbiza ezinzima kunye neepani ngaphezulu komnye (kunye nokusebenzisa indawo yeshelufu enexabiso) faka nje iphegibhodi eludongeni olukhululekileyo. Ngequbuliso izinto zakho zomthwalo onzima ziyaboniswa kwaye kulula ukuyibamba. UMarianne Evannou yongeze amanye amagwegwe kunye neeshelfu zekhitshi ezahlukeneyo kunye nezinto ezibalulekileyo apha.
Umcwangcisi wegumbi le-3d
5 Iibhokisi zeRepurpose Amakhitshi eDVV
THENGA NGOKU Ikhreyithi yomthi, $ 19
Konke okufunekayo yikhreyithi yomthi yokucoceka kwezinye iishelfu eziveziweyo kwaye ikuncede ufihle izinto ezingafunekiyo ezingafunekiyo. Kuba izinto ezigcinwe apha kunzima ukufikelela kuzo, gcina izinto ongazisebenzisi yonke imihla, njengee-totes ezinokuphinda zisebenze kuyo.
6 Beka Izahluli zeDraw UMKRISTU GARIBALDI
THENGA NGOKU Abahluli beGoodgrips, $ 20
Ukuthintela zonke iibhotile zakho, iinkonkxa, kunye nezinye izinto zepatri ekubeni zingadluli kwiidrowa zazo, thenga abaququzeleli beedrowa ezizinceda zigcine zonke zisendaweni. UHeidi Piron Uyilo kunye neKhabhinethi Ufakelo olwahlulayo oluguquguqukayo apha ukugcina iibhotile zotywala zingadibani kunye, kodwa izinto ezahlulayo ziya kuba luncedo kuyo nayiphi na into kwiidrowa zakho zeepaneli, ngokwenene.
7 Chonga indawo yeNtengiso yeNtengiso UVictoria Pearson
THENGA NGOKU Iindonga eziHanjiswe ngodonga, $ 24
Chonga indawo yentengiso yakho okanye inqwelomoya kwaye ubeke iingxowa ezingaphezulu kuyo ukuze uhlale ukulungele ukuya kwintengiso yomfama. Amanqaku ongezelelweyo okuqinisekisa ukuba izixhobo zokukhusela ilanga zikufuphi, njengomyili UChris Barrett Ngaba yenze umlobothi waseludongeni kwiminqwazi apha.
8 Sebenzisa iLadi yeThala leencwadi UMegan Bierle-O'brien
THENGA NGOKU Ileli leme, $ 60
Ukuba unendawo ethe nkqo, yolula ikhabhathi yonke indlela eya phezulu eludongeni, njenge UCaren Rideau wenze kule pantry. Imilinganiselo emide yethala leencwadi iya kongeza isitayile esithile kwaye ikuncede ufikelele kwezo zinto ziphezulu.
9 Ukukhupha iikhabhathi USara Wanyathela iLigorria
THENGA NGOKU Ukukhupha i-Drawer, i- $ 100
Ufikelela njani kwinto engenakuphepheka inyanzelwa yonke indlela uye ngasemva kwepryry? Landela ukukhokela I-IKEA imigewu kwaye ungeze iidrowa, okanye uqaphele eli khitshi lilungiswe nguEmily Henderson kwaye wandise iikhabhathi zakho ngokususa amacala kwaye uzijike zibe ziidrowa.
10 Gquma iindonga Uyilo lukaHeather Hilliard
THENGA NGOKU Iphepha lodonga elisuswayo, $ 50
Ngamanye amaxesha azikho iiyure ezaneleyo ngosuku lokuhambisa onke amashwamshwam akho kwimigqomo kunye nakwizikhongozeli. Kodwa oko akuthethi ukuba awukwazi ukubasusa kude kwindawo ebonakalayo. Apha, UHeather Hilliard igcina izinto ze-pantry ezifihliweyo ngasemva kweengcango zekhabhathi kwaye emva koko ihombise isithuba ngephepha lodonga.
Shumi elinanye Bhala yonke into UTomas loof
THENGA NGOKU Ugcino lweWicker Bin, $ 21
Gcina umbutho ulula ngokusebenzisa izikhongozeli ezineziciko ezivuzayo kwaye uleyibhelishe ukuze wazi ukuba yintoni kanye kanye. Ungazifumba izinto ngaphezulu kwenye ngaphandle kokukhathazeka ukuba ziya kuwa phantsi ngexesha elizayo xa ufikelela kwinto ethile- kwaye abayi kuphalaza.
Igumbi lomgubo izimvo ezingelutho
12 Okanye, zama iiJars ezibhalwe kwangaphambili UWerner Straube
THENGA NGOKU Ukuqokelelwa kweJar Jar, $ 177
Ukujonga okuthe kratya, thabatha amanqaku kolu luhambo luhamba ngalo UCorey Damen Jenkins kwaye usebenzise iingqayi zesiramic zemveli ezineelebhile kuzo zokugcina ukutya kwakho.
13 Isithuba seKhabinethi ephindwe kabini IKraftMaid
THENGA NGOKU Ugcino lweKraftMaid
Iifoto zokuhombisa iikhitshi iifoto
Zibukrelekrele kangakanani ezi zinto zininzi zamacandelo eKraftMaid ezigcinwe emnyango? Ukuba namagumbi aphezulu, iikhabhathi ezinzulu zihlala ziyintsikelelo kwindawo yokugcina, kodwa ngamanye amaxesha izinto ezincinci zingalahleka. Oku kufaka kusombulula ingxaki. Ukuba awukwazi ukutyala imali kwezi zinto ngoku, qiniseka ukuba usebenzisa umva womnyango wakho we-pantry (nokuba ukuxhoma i-shoe rack kunokukunika ukugcinwa okungaphezulu).
14 Nikezela udonga kwiincwadi zokupheka UDAVIDE A. UMHLABA
THENGA NGOKU Umda odadayo, $ 89
Ukuba unengqokelela engapheliyo yeencwadi zokupheka kwaye akukho ndawo yokuzigcina ngendlela ecwangcisiweyo, ke esi sisisombululo sakho. Umyili UJean Stoffer Nikezela udonga olupheleleyo kwiincwadi zokupheka zikaJoanna Saltz ngokufaka iishelfu ezincinanana ezintathu zokuzixhasa.
Shumi elinantlanu Khusela iKhabhinethi edadayo Indlu entle
THENGA NGOKU IKhabhinethi edadayo, i-149 yeedola
Ukuba ufuna ukugcina iziqholo zakho kwenye indawo kulula ukufikelela kuzo ngelixa upheka kodwa ufuna ukuzifihla, fihla ikhabhathi yokugcina edadayo enomnyango opeyintiweyo. Ngelixa ivaliwe, akukho mntu uya kwazi ukuba iyintoni na ngaphandle kokuhonjiswa ngodonga. Kufana nomzobo olula phezu komnyango wekhabhathi yakho okanye uwugubungela ngephepha lodonga.
16 Zama ukuLondolozwa kweModyuli JESSIE PRESA
THENGA NGOKU Ukuxhoma iimpahla eziThengisiweyo, $ 30
Krysta Gibbons ze I-Kipling House yangaphakathi Yahlula ikhitshi elikhulu kumagumbi amabini: ikhitshi eliphambili, apho konke ukupheka kwenziwa khona, kunye nekhitshi lokutya / lokuhamba ngaphakathi. Izixhobo zeBulky zithathiwe kude, kunye nokutya kunye ne-serviceware, ngelixa ishelfu evulekileyo ixhasa izinto zokubamba kunye nokuhamba ukuze zilungele. Olunye ugcino lwodonga kwi-pantry engayi kuba sisigxina, unokuzama ukusebenzisa isinki kunye neeshawari zekhadi, abaququzeleli beVelcro kwiipakethi ezincinci ezikhululekileyo, kunye neziqwengana ze-chip.
17 Guqula iKona engasetyenziswanga Indlu entle
THENGA NGOKU Iyunithi yokuLungisa iChannel, i $ 70
Ukuba awunagumbi linikezelweyo njengepryry, usenokwenza ngekona engasetyenziswanga ekhitshini okanye kwipaseji ekufuphi. Yonke into oyifunayo kukumodareyitha okunokugcinwa okuninzi. Ukuze ibonakale ikhazimlisiwe kwaye inenjongo, yongeza indawo entle.
18 Yahlulele kwizikhongozeli ezahlukeneyo UEmily Minton Redfield
THENGA NGOKU Imigqomo yoGcino lokugcina, $ 17
Njengokuba sithanda ukujonga okungaguquguqukiyo, ngamanye amaxesha ubukhulu-bento-yonke indlela ayisebenzi, ngakumbi xa ukuhlala ucwangcisiwe yinjongo. Kule pantry nge Isitudiyo seDearborn , ezahlukileyo izikhongozeli ezahlukeneyo, iibhasikiti, imigqomo isetyenzisiwe, kuxhomekeke kwinto leyo ebonisa ukuba ilungile. AmaLady Susans lolunye uluvo olukhulu lokwenza izinto kube lula ukufikelela kuzo!
19 Sebenzisa ubungakanani beContainer Container kunye neeMilo Iiklasi eziHlanganisiweyo
THENGA NGOKU Izikhongozeli zokuGcina ukutya, i $ 32
umququzeleli wezihlangu kwikhabhathi encinci
Musa ukuzingela kwiintaba zeebhokisi zekhadibhodi. Endaweni yoko, tshintshela izithako kunye namaqebengwana kwii-canisters ezicacileyo ukuze ungatsiba iilebheli zokufunda-kwaye ukhuthaze ukucoceka okufanayo. Kwaye uya kugcina iimpuku kude neicookies zakho kunye nabaqhekezi. Bona ngakumbi kwi Iiklasi eziHlanganisiweyo .
Amashumi amabini Hang Hang Ngokunyanisekileyo kwe-Navage Patch
THENGA NGOKU Hook yokuncamathela, $ 6
Yongeza amagwegwe kwicala lomnyango wakho we-pantry ukuxhoma i-oven mitts, iitawuli, kunye / okanye iifaskoti. Ngale ndlela, awuthathi nayiphi na idrowa okanye indawo yeshelufu kunye neelineni zakho. Bona ngakumbi kwi Isiqwenga seNavage .
amashumi amabini ananye Beka uLids emnyango Inkundla Yento
THENGA NGOKU Umququzeleli wePot Lid, $ 17
Ukugcina imbiza kunye neepani yinto enye, kodwa ukufumana indawo yeebhondi zazo, nayo yingxaki eyahlukileyo ngokupheleleyo. Ingcango yomnyango iyazigcina zingaphandle kwendlela yakho, kodwa ziyafikeleleka ngokulula xa uzifuna. Bona ngakumbi kwi Inkundla Yento .
Iignomes zekrisimesi ziyathengiswa
imibala ehamba nengwevu
izibane ezipholileyo kumagumbi
susa i-rust cast iron skillet